ဂေဇက်ရွာအကြောင်းနှင့် ဘုရားခိုးမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဂေဇက်ရွာအကြောင်းနှင့် ဘုရားခိုးမှု
Posted by ဇောက် ထိုး on May 4, 2012 in My Dear Diary | 11 comments
အလွန်သာယာလှပတဲ့ ဂေဇက်ရွာကို ကျွန်တော်ရောက်တာ မကြာသေး ပါဘူး။ မကြာသေးပေမယ့်လဲ ဂေဇက်ရွာရဲ့ လှပပုံ.. သာယာပုံ ချစ်စရာကောင်းပုံတွေကိုတော့ မပြောပဲ မနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဂေဇက်ရွာရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ရွာဦးကျောင်းရှိပါတယ်။ကျောင်းထိုင် ဆရာ တော်အရှင်အရိယ။ ဆရာတော်က ရွာသူရွာသားတွေကို အမြဲလို တရား ဓမ္မတွေဟောညွှန်ပြပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေထဲမှာ ကြိုက်သူလဲရှိကြသလို အကြိုက်နဲသူတွေလဲရှိရဲ့။ ထူးချားတာက ကြိုက်သူကိုရော.. အကြိုက်နဲသူ ကိုရောဆရာတော်က တသားတည်းထားပြီးဟောမြဲဟောလျှက်ပါပဲ။ မခွဲခြား ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက်ရွာကို သူကြီး ခိုင်ကအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ အစိမ်း အကျက်..အင်းအားရှိ..မဲ့…မခွဲခြားပါဘူး။ ဥပဒေနဲ့အညီသာ အုပ်ချုပ် ပါတယ်။ ရွာသူ ရွာသားတွေက သူကြီးခိုင်ကို ချစ်ကြပါတယ်။ လေးလဲ လေးစားကြပါတယ်။ ကြောက်တော့ မကြောက်ရပါဘူး။ဒါလေးကလဲ ဂေဇက်ရွာရဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဒီမိုကရေစီလို့ ဆိုရမလားပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက်ရွာမှာ ကောင်ကင်ပြာတို့ ဂျူဂျူမ တို့ မမတို့စတဲ့ ရွာရဲ့ကျက် သရေဆောင်ကွမ်းတောင်ပန်းတောင်ကိုင် လှပျိုဖြူလေးတွေကလဲဂေဇက်ရွာ ရဲ့အလှကို ပေါ်လွင်စေပြန်ပါတယ်။
လှပတဲ့အသာဝတီနွယ်နီနတ်ပန်းလေးတွေနဲ့ ဂေဇက်ရွာဆိုတဲ့ ဗိမ္မာန်ကိုကာ ရံထားကြတဲ့ ရွာရဲ့ ကာလသားခေါင်းများဖြစ်ကြတဲ့ ကိုကြောင်ကြီးတို့.. ကိုဘီလူးကြီးတို့…ကိုကြီးဂျော်နီအောင်ပုတို့ကလဲ ရွာကိုစော်ကားသူဆိုရင် ခြင်တောင်ချမ်းသာမပေးတဲ့ ဂေဇက်ရွာရဲ့ သူရဲကောင်းတွေလို့ဆိုရမှာပါ။
ကိုကြီးကြောင်ဆိုရင် ရွာမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေဖြစ်တော့ ခြင်တွေကြောင့် ဆိုပြီး ငှက်ကြီးတောင်ဓားနဲ့ ခြင်တွေကိုလိုက်ခုတ်နေလို့ တရွာလုံးက ၀ိုင်းပြီး ဆေးရုံ ပို့လိုက်ရပါတယ်။
ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်..ဆိုတဲ့ဆေးခန်းကြီးရဲ့ပိုင်ရှင် သခင်ကိုယ်တော်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးကလဲ ရွာရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အားကိုးရပါ တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကပါ..အားထားရတဲ့အနေအထားပါ။
စုန်း နတ် ပယောဂတွေယုံကြည်သူတွေကိုကြတော့လဲ….မဟာထမိန်ကြီးဝါ ဒဆိုတဲ့ ဂျားလမ်းဆရာကြီးက ဥံဖွ ပေးပြန်ပါတယ်။ မှားတာ မှန်တာထက်.. အစွဲသန်သူ ရွာသူ ရွာသားတွေအတွက်တော့လဲ စိတ်ဖြေဆေးတလက်ပါပဲ။
မျက်နှာက ပြုံးရွင်ပြီး အမြဲတမ်းမူးနေတဲ့ လူကြီးနဲ့လူငယ်ကြား ပေါင်းကူး တံတားလဲဖြစ်တဲ့.. ကိုဗိုက်ကလေးလိုအမူးသမားလေးလူကလဲ ဂေဇက်ရွာကို ခေတ်မှီရင်ဘောင်တန်းစေတယ်လို့ဆိုရမလား။ကိုယ်ဗိုက်ကလေးဟာအမူးသမား ဆိုပေမယ့် သူ့ရုပ်နဲ့သူ့ဟန်ပန်ကြောင့် ရွာသူရွာသားတွေကတော့ ချစ်ကြပါတယ်။သာရေး နာရေး ဆိုရင် သူတို့က နောက်ကွယ်က အပြည့်အ၀ ကူညီကြတာမဟုတ်လား။သားပြစ် မယားပြစ်ပါပဲ။
အဲ……ရွာမှာ စောစောက နှစ်လုံးတွေ သုံးလုံးတွေ ခေတ်စားတုန်းကတော့လဲ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ မဟာရာဇာ အန်ဇာတုံး ကဒိုင်တွေ ဘာတွေဖွင့်ပါသေး တယ်။ ရွာသူကြီးကလဲ မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီးနေပါတယ်။ ကွယ်ရာမှာတော့ ကိုယ့်ရွာက ငွေ..အပြင်မရောက်အောင် မသိဟန်ဆောင်နေတာတဲ့။ ခုတော့ လောင်းကစားပပျောက်ရေးလုပ်ပြီးကတည်းက မလုပ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မဟာရာဇာ အန်ဇာတုံးကတော့ အလောင်းအစားကို ၀ါသနာက ခပ်ပါပါ။
တခါတခါမှာ မြို့သွားနေတဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ဆိုတဲ့သူပြန်လာရင် အထူးအဆန်း လေးတွေ မြင်ရကြားရပြန်သဗျ။ သူက မြို့တွေပေါ်မှာအနေများတော့ ရွာသားများ အမြင်နဲ့သိပ်တော့မတူချင်ဘူး။ သူလာရင် တခါတခါ ရွာမှာ ဆူကျန်ခဲ့တတ်ပေမယ့် သူကလဲ သူ့ဂေဇက်ရွာကို အလွန်ချစ်သူဆိုတာ ထင် ရှားပါတယ်။
နောက် ဦးပါကြီးတို့လို ရွာမိ ရွာဖများကလဲ ရပ်ရွာရဲ့အကျိုး သက်ကြီး ရွယ်အိုအကျိုးများကိုအမြဲစဉ်းစားပြီးကြိုးစားကြပါတယ်။ဦးပါရဲ့စီစဉ်ညွန်ကြား မှု….ရွာသူကြီးရဲ့ကူညီမှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂေဇက်ရွာမှာ…စိတ်ကူးယဉ် ဆိုတဲ့ ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြန်ပါတယ်။
ဂေဇက်ရွာရဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောရရင်တော့ ကုန်မှာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဂေဇက်ရွာမှာလူလာဖြစ်ရတာကတော့ လူဖြစ်ရကျိုးနပ် တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး.. ပညာရေ…ဘာသာရေး လူမှုရေး လိုလေးသေးမရှိလို့ဆိုရမှာပါပဲ။
မနေ့ညက..ကျွန်တော်တို့ဂေဇက်ရွာ ရွာဦးကျောင်းက ဘုရားဆင်းတု တစ်ဆူကို သူစိမ်းသူခိုး နှစ်ယောက်ဝင်ခိုးပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုကြောင်ကြီးတို့..ကိုဘီလူးကြီးတို့ ကိုအောင်ပုတို့ ရွာကင်းလှည့်တုန်းနဲ့ ပက်ပင်းတိုးပြီးမိပါလေရော့ဗျာ။ ဒါကို ဗိုက်ကလေးကလဲမူးပြီး ကြားလိုက် တော့ ရွာဦးကျောင်းသူခိုးမိလို့ဆိုပြီးရွာထဲကနေအော်လာ အို…တရွာလုံးဝိုင်း လာလိုက်ကြတာ လူတွေကျောင်းဝိုင်းအပြည့် ဖြစ်သွားတာပဲ။ဒါရပ်ရွာရဲ့ ညီညွတ်မှု အင်းအားမဟုတ်လား။
တယောက်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရိုက်လိုက် ကန်လိုက်နဲ့ သူခိုးတွေခမျာ သနား စရာတောင်ဖြစ်သွားရှာတယ်။ ဘုရားမှ ခိုးရတယ်လို့ ဆိုပြီး တံတွေးနဲ့ ထွေးတဲ့ သူတောင်ရှိသေး။
တော်သေးရဲ့ သူကြီးရောက်လာတာမြန်လို့ ဒင်းတို့သက်သာသွားတယ် မှတ်ပါ။ အဲဒီမှာ ဆရာတော်လဲရောက်လာပြီး မရိုက် မနှက်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ သူကြီးက ရဲစခန်းအပ်ဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ရွာထဲ ကိုထုံးဘဲဥက…အင်းသူတို့ခုလိုခိုးရင်..ခုလိုခံရမှာလို့ မသိကြ ဘူးလားတဲ့။ အကန်ခံရ…အရိုက်ခံရ…အဖမ်းအဆီးအချုပ်အနှောင်ခံ ရ သူခိုးတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီကလေးတွေ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သူခိုးဘ၀ရောက်နေကြတာ..အင်း…ဒါဟာ အတိတ်ကံ ပေါ့လေ… ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။
ကိုနာနာ ဆိုတဲ့ လူကလဲ…ဒီကလေးတွေ ခုလိုသူခိုးဖြစ်ကြတာဟာ… ဘုရားသခင် အလိုတော်ကြလို့ပြောရမှာပါတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်ဒါဘုရားသခင် အလိုတော်အရပါတဲ့။ ဆရာတော်ကတော့ ပြုံးနေပါတယ်။
ဒီမှာတင် ကိုယ်ဗိုက်ကလေးက အာလေး လျှာလေးနဲ့…ထပြောပါတယ်။ နေကြပါဦး….သူတို့အတိတ်ကံကြောင့်ခုလို သူခိုးဖြစ်ရတာ ….. ဘုရားသခင် အလိုတော်အရ ခုလို သူခိုးဖြစ်ရတာ ဆိုရင်… ဒီသူခိုးတွေ ခုလို သူခိုးမဖြစ်အောင် ပြုလို့ပြင်လို့ မရတော့ဘူးပေါ့။ ခုလိုခိုးတာကလဲ အတိတ် ကံ ကြောင့်…ဘုရားသခင်အလိုတော်ကြောင့်ဆိုရင်..သူတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူး သနားစရာတောင်ကောင်းနေပါတယ်။ ရဲစခန်းမအပ်ကြပါနဲ့။ သူတို့ခမျှာ ဟိုဘ၀က အတိတ်ကံကြောင့် ခိုးနေရရှာတာပါ။ ဘုရားသခင်အလိုတော်အရ ခိုးနေကြရရှာတာပါ။ သနားပါတယ်။ ဒီလိုသူခိုးလေးတွေ..ဂျပိုးလေးတွေကို လူကောင်း သူကောင်းဖြစ်သွားအောင်လဲ လုပ်လို့မရတော့လို့ လုပ်စရာလဲ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဗိုက်ကလေးတို့ ခုလိုအရက်သောက်နေရတာလဲ အတိတ်ကံကြောင့်နော်။ ဘုရားသခင်အလိုတော်ကြနော်…ဗိုက်ကလေးကို အပြစ်မပြောကြနဲ့။ သောက်ချင်လို့သောက်နေရတာမဟုတ်ဘူး။ ဟင်း..ဟင်း….. ဆိုပြီး ထဆော်ပါတော့တယ်။ ဒီနေရာမှာ သူကြီးက ခပ်လှမ်းလှမ်းကဆရာတော်ကို လှမ်းကြည့်လိုက် ပါတယ်။
ဆရာတော်အရှင်အရိယက ချောင်းလေးဟန့်ပြီးခုလို မိန့်ပါတယ်။ ရွာသား တွေ ခုလိုပြောတာ ကောင်းပါတယ်။ ခုလို ဝေဘန်ကြမှ တိုးတက်မှာ။ တကယ်တော့ အတိတ်ကံကြောင့် သူခိုးဖြစ်ရတာဆိုရင်တော့ ဒီအယူဟာ ဟိန္ဒူရဲ့ အယူအဆပါ။ ဘုရားသခင်အလိုတော်အရဆိုရင်တော့ ခရယာန် အစ္စလာန်တို့ရဲ့ အယူအဆအရပေါ့။ ဘုန်းဘုန်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အရဆိုရင်တော့ ခုလို သူခိုးဖြစ်ရတာဟာ သူခိုးဘ၀ရောက်နေကြလို့ပဲ။ အဲဒီလို သူခိုးဘ၀ရောက်နေရတာကတော့ ခိုးတဲ့အလုပ် (ကံ)ကြောင့်ပဲ။ ခိုးတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ပဲ။ ခိုးတဲ့အလုပ်..လုပ်တာကလဲ…သူများပစ္စည်းကို အချောင် လိုချင်တဲ့ လောဘဆိုတဲ့ ကိလေသာကြောင့်ပဲ။ လိုချင်တဲ့ လောဘ ကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်…ခိုးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ် (ကံ) ကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခိုးတဲ့အလုပ် မလုပ်ရင် သူခိုးဘ၀ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူခိုးဘ၀ မရောက်ရင် ခိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူခိုးမဖြစ်အောင် သူခိုးဘ၀ မရောက်အောင် ကြိုးစားကြရမယ်။ သူခိုးဘ၀ မရောက်အောင် ကလဲ ခိုးတဲ့အလုပ် (ကံ)ကို မလုပ်ကြဖို့ပဲ။ ခိုးတဲ့အလုပ် မလုပ်ဖြစ်အောင်ကလဲ သူများပစ္စည်းကို အချောင်ရချင်တဲ့ လောဘဆိုတဲ့ ကိလေသာကို ပယ်ရမှာပဲ။ လူမှာ လောဘမရှိရင် ခိုးတဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခိုးတဲ့အလုပ် မလုပ်ရင် သူခိုးဘ၀မရောက်ဘူး။ သူခိုးဘ၀ မရောက်ရင် သူခိုး မဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူခိုးမဖြစ်အောင်..လူဆိုးမဖြစ်အောင် ပြုပြင်လို့လဲရပါတယ်။ အတိတ်ကံ ကြောင့်တို့ ဘုရားသခင်အလိုတော်အရတို့ဆိုရင်တော့ လူဟာ ကိုယ်ဟာကို ဘာမှမပိုင်လို့ ပြုလို့ပြင်လို့ရသူမဟုတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကဲ ညစ်လဲ နက်နေပြီ…ပြန်ကြတော့ပြန်ကြတော့ဆိုပြီး မိန့်ပါတယ်။ အားလုံး စဉ်းစား စရာပါ။ ဒီစကားမျိုးကြားရတာကလဲ ဂေဇက်ရွာမှာ လူဖြစ်ရကျိုး နပ်ခြင်း တစ်ခုပါပဲ။ ကဲကျွန်တော်ပြောတာကြာသွားပါတယ်။ နောင်ကို ဂေဇက်ရွာရဲ့ ခေတ်နဲ့ညီတဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကြိုးစားကြပုံတွေ လွပ်လပ်ပုံတွေကို တင်ပြပါဦးပါမယ်။ ရွာသူအပေါင်း ကျန်းမာပါစေကြောင်း။
မနက်စောစော စဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာ ရဲ့ အနှစ် ကို သဘောကျလွန်းလို့ ငြိမ်မနေနိုင်ဘဲ စောစောစီးစီး အချိန်ခိုး ပြီးဝင်ပြီး မှတ်ချက်ပေးလိုက်ရပါတယ် ကိုဇောက်ထိုးရှင့်။
“ဘာသာရေး” ဆိုတာ ခဏဘေးဖယ်ထား။
အလွန်တရာမှ လက်တွေ့ သိပ္ပံနည်းကျ လှသော စမ်းစစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိလေသာ အမှောင်တိုက်မှာ ကျင်လည် နေရတဲ့ လူမျိုးဘာသာ မရွေး လူသားအားလုံး ရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘော နဲ့ လဲ ကိုက်ညီပါပေတယ်။
“အဲဒီလို သူခိုးဘ၀ရောက်နေရတာကတော့ ခိုးတဲ့အလုပ် (ကံ)ကြောင့်ပဲ။ ခိုးတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ပဲ။ ခိုးတဲ့အလုပ်..လုပ်တာကလဲ…သူများပစ္စည်းကို အချောင် လိုချင်တဲ့ လောဘဆိုတဲ့ ကိလေသာကြောင့်ပဲ။ လိုချင်တဲ့ လောဘ ကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်…ခိုးခြင်းဆိုတဲ့အလုပ် (ကံ) ကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခိုးတဲ့အလုပ် မလုပ်ရင် သူခိုးဘ၀ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူခိုးဘ၀ မရောက်ရင် ခိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူခိုးမဖြစ်အောင် သူခိုးဘ၀ မရောက်အောင် ကြိုးစားကြရမယ်။ သူခိုးဘ၀ မရောက်အောင် ကလဲ ခိုးတဲ့အလုပ် (ကံ)ကို မလုပ်ကြဖို့ပဲ။ ခိုးတဲ့အလုပ် မလုပ်ဖြစ်အောင်ကလဲ သူများပစ္စည်းကို အချောင်ရချင်တဲ့ လောဘဆိုတဲ့ ကိလေသာကို ပယ်ရမှာပဲ။ လူမှာ လောဘမရှိရင် ခိုးတဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ခိုးတဲ့အလုပ် မလုပ်ရင် သူခိုးဘ၀မရောက်ဘူး။ သူခိုးဘ၀ မရောက်ရင် သူခိုး မဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူခိုးမဖြစ်အောင်..လူဆိုးမဖြစ်အောင် ပြုပြင်လို့လဲရပါတယ်။”
ကျွန်မ လဲ ရုံးမှာ ခိုး လိုက်မိတဲ့ အချိန်ကို လဲ ပြန်ဆပ်ဖို့ ဘရောက်ဆာလေး ပိတ်လိုက် ဦးမှ။ ;-)
မဟုတ်ရင် ခိုးပြီးရင်းခိုး ချင် ဖြစ်နေပါ၏။
ကျနော်လည်း အရီးလတ်လို ပါပဲလို့ …
ရုံးမှာ မသိအောင် ခိုးခိုးပြီး သုံးရတာ …..
ကွန်မန့် တစ်ခါ ပေးဖို့အရေး တော်တော် အချိန်ယူရတယ် .. ရုံးမှာ ..
အရေးထဲ ရုံးမှာက ဇော်ဂျီဖောင့် သုံးလို့ မရတော့ သာဆိုးတော့တာပေါ့ …..
ရေးတဲ့လူက ဗိုက်ကလေး ပြောသလိုပဲ ..
တော်တော်ကို သိနေပါပေါ့ .. နော့ …
ကျနော်ဆို အဲလောက် အချိန်တုန်းက သဂျီးဆိုတာ ဘယ်သူမှန်းတောင် သိဘူးရယ် …
ခုတော့လား …. ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲ လက်ညှိုးထိုး ပြရတော့မလားပဲ … :D
မိုးပြာဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သိသင့်တာတခုရှိတယ်.. ကျုပ်တော့ ကြိုက်တယ်..။
“ကောင်းတာလုပ်ရင်.. ကောင်းတဲ့သူဖြစ်မယ်..။ ဆိုးတာလုပ်ရင်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်မယ်”ဆိုတာပဲ..
“ကောင်းတာလုပ်ရင်.. ကောင်းတာဖြစ်မယ်..။ ဆိုးတာလုပ်ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်”တဲ့..
လူကို.. ၃ကိုယ်ခွဲစေတာ.. အဲဒီတကြောင်းထဲကြောင့်ပဲလို့ထင်မိတယ်..
မကောင်းတာတွေချည်းလုပ်နေသူတွေဟာ.. ကျိကျိတက် ချမ်းသာလို့..။ ဘ၀တလျှောက်.. ကောင်းတာတွေချည်းရွေးဖြစ်နေကြတာ..
လက်တွေ့မကျတဲ့..အဓိပါယ်သက်ရောက်နေတာမို့.. ကာမိအောင်.. လူလိုက်မမှီအောင်.. နောင်ဘ၀ကို ပို့လိုက်ကြရတော့တယ်..။
ခုတလော.. ရွာအနောက်ထောင့်လေးမှာ.. ဗလီတခုတည်မလို့လုပ်နေလေရဲ့..
ဒါပေမဲ့..ထုံးစံအတိုင်း..အရှေ့၇အိမ်..အနောက်၇အိမ် ထောက်ခံစာပါမှ.. တည်လို့ရမယ်..
သဂျီး ဘယ်တုန်း က နေပြည်တော် ရောက်ခဲ့တာရဲဟင် ၊ ဂူးဂဲအက်နဲ့ များ မြင်သွားတာများလား ။
ရွာအနောက်တောင်မြောက်တွေမှာလည်း.. ဆရာတော်တွေရှိပါသေးတယ်.. )
ဆရာတော်တွေတင်မကဘူး သိက္ခာရှင် အလောင်းအလျာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ :D
သဂျီးရဲ့ ၃ကိုယ်ခွဲတရားကိုပဲ ပြောရမယ်ဆိုရင်….
ဒီမိ ဒီဖ ဒီမိသားစုထဲ ရောက်လာတာ၊
ဒီရုပ် ဒီရည်နဲ့ ဒီဥာဏ်ပညာ၊ ဦးဏှောက်တွေကို ရလာတာ၊
ဘ၀တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ မွေးရပ်ဇာတိက တခြား၊
ထိုင်ဝမ်-ချိုင်းနားတို့ကထုတ်တဲ့ ပန်းသီး air book ကွန်ပြူတာတွေဘ၀လေ့လာကြည့်ပါလား..
တချို့က.. အီသီယိုပီးယားက.. အာမစ်လက်ထဲရောက်တယ်..
တချို့က.. မြန်မာပြည်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဧည့်ခန်းစားပွဲအောက်မှာ ဖုန်တက်နေတယ်..
ခလုပ်ဖွင့်လိုက်ရင်လည်း.. မျိုးကိုစုံနေတဲ့.. အဖြစ်တွေလာတာပါ..။
တခုနဲ့တခု.. စက်ရုံကရိုက်ထုတ်လိုက်တာတောင်. မတူနိုင်ပါဘူး..
ဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့… အဲဒါတွေကိုကိုယ်ကထိန်းကြောင်းမရ.. ဖန်တီးမရတာမို့.. ရှည်ဝေးလိုက်တွေး.. လေ့လာမလုပ်ခိုင်းပါဘူး..
.. မာလုကျပုတ္တ..ထိုအကြောင်းသည် အကျိုးစီးပွား နှင့် မစပ်..မြတ်သော သာသနာတော် ၏ အစအနမျှလည်း မဖြစ်..၀ဋ်ဆင်းရဲကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ရာဂကင်းခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ရာဂ ချုပ်ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ကိလေသာမီးငြိမ်းအေးခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ထူးသောဥာဏ်ဖြင့် သိခြင်း ငှာမဖြစ်နိုင်..သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှာမဖြစ်နိုင်..ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာကို ငါဘုရား မဟောကြား…..
သူခိုးဆိုလို့ .ဗိုက်ကလေးတို့ က ဘယ်တော့မှ မခိုးဘူးဗျ..မသိအောင်ပဲ ယူတာ..
ဘီအီးသောက်တာ သောက်ချင်လို့ သောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ..အတိတ်ဘ၀က ကံကြောင့်..အဲလေ.ယောင်လို့ ..မူးချင်လို့ သောက်တာပါ..
စကားမစပ်..ကိုဇောက်ထိုးတောင် ရွာစားတွေကို တော်တော်မှတ်မိနေဘီ..
များတောင် ဆိုက်ကားထွက်နင်းနေရတာနဲ့ အဲလောက် မမှတ်မိတော့ဘူး..
အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပိုစ်လေးပါ ။
အိုက်လိုပေါဂျေးဆို လူ့ဘီဈဆိုဒါ ဘယ်သွားထားမလဲကွဲ့.. မျက်တောင်မွှေးတဆုံးကြည့်ဒေါ့ ဟုတ်တာပေါ့ ကံဆိုဒါ အလုပ်.. သို့သော် မွေးကဒဲဂ ပါရမီရှင်ဒွေ၊ စရိုက်အမျိုးမျိုး အကျင့်အမျိုးမျိုးကြတော့ လက်ရှိအလုပ်တခုထဲ ပြောလို့ရဒေါ့ဘူးကွဲ့..။ ကိလေသာ ကုန်သွားဒဲ့ ရဟန္တာတောင် စရိုက်အမျိုးမျိုး ကျန်ဒယ်။ (ဒါဂ သိပ်မြင့်လို့ မိုးပြားသတ္တဝါဒွေ မလိုက်နိုင်ပါဘူး) ဒီတော့ လွဲလွဲဂလေးပြောမယ်…။ နောက်ထပ် ဆယ်နှစ်ကြိုးစားလိုက်အုံး.. ပြီးမှ လျောက်ပေါ…
ကိုကြီးကြောင်ရေ..အနော်ပေါမယ်နော်။ လူ့ဘီဈ ဆိုဒါက…မျိုးစိ သတ္တိရဲ့ သဘော။ ဖေတွေ မေတွေဆီက ပါလာတဲ့အရာမျိုးကို မျို့စေ့ ဘီဈ။လို့ခေါ်တာဟုတ်ဖူးလား။
နောက်…ကံ ဆိုဒါ အလုပ်လို့ကျောတယ်နော်။ အလုပ်တိုင်း ကံဖြစ်သလား။ ကိလေသာမရှိတဲ့ ဘုရား ရဟန္တာတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကျတော့ ဘာပြုလဲ ကံမဖြစ်သလဲ။ ကိလေသာဝတ်ကြောင့် ကမ္မ၀တ်ဖြစ်တာ လို့ဆိုတော့ ကိလေသာနဲ့လုပ်မှ ကံဖြစ်တာမဟုတ်လား။ ဘုရား ရဟန္တာတွေ ဘာလုပ်လုပ် ကိလေသာ မရှိတော့ သူတို့အလုပ်တွေ ကံမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ ပါရမီရှင်ဆိုတာ ဘာရဲဟင်။ ပါရမီဆိုတာ…ပရမာနံ ကမ္မံ ပါရမီဆိုတော့ မြင်မြတ်သူတွေရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြောတာဟုတ်ဖူးလား။
စရိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့ အကျင့်အမျိုးမျိုးဆိုတော့ စရိုက်နဲ့ အကျင့်က တခြားဆီလားဟင်။ အဲဒီစရိုက်ဆိုတာ ဟိုဘ၀က ပါလာတဲ့အရာလားကိုကြီးကြောင်။။ ကိုကြီးကြောင်ရယ် အနော်ကိုတော့ ဆိတ်လဲဆိုးစေချင်ဘူး။ မှားရင်လဲ ပင်ပေးနော်။ အနော်တို့က မိုးပြာဟုတ်ပါဘူး။ တရားကို တန်ဖိုးထားလေ့လာသူတွေပါ။ ဆွေးနွေးတာနဲ့ စိတ်ဆိုးမယ်ဆိုရင်…အားလုံးဘယ်ကောင်းမှာလဲ ကိုကြီးကြောင်ရယ်။ မှားရင်ခွတ်လွတ်နော်..ကိုကြီးကြောင် စိတ်ချမ်းသာပါစေ….
နောက်ပိုးတဲ့ ဇောက်ထိုးရေ လျောက်မတိုးနဲ့ သောက်ကျိုးနဲမယ်…
ဗီဇဆိုဒါဂို ဇဗားလုံးတထောက် အသိညဏ်နဲ့ မကြည့်နဲ့ကွဲ့..။ ရုပ်သတ္တိ နာမ်သတ္တိ နှစ်မျိုးဇလုန်း အကျုံးဝမ်ဒယ်…။ တရုပ်မလေးနဲ့ဦးကြောင်စပ်ရင် စီလုပ်ကပြားလေးထွက်မယ်၊ တာလီဘန်ဂလေး မထွက်ဘူး (ဂျားကားဆွဲဒါ မပါဂျေးကွာ :mad: ) အဲဒါ ရုပ်သဘော အကြမ်းဇုံးဘဲ။ နာမ်သဘောကြဒေါ့ တူဒေါ့ဘူးကွ.. မိဘနှစ်ပါး စိတ်နေသဘောထား အကျင့်ဇရိုက်နဲ့ ပေါက်ဖွားလာဒဲ့ ခလေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇ တူနိုင်ဘူး။ ရုပ်ပိုင်းမှာတောင်မှ ပြုဂဲ့ဒဲ့ကံဂိုလိုက်လို့ မွေးဖွားစဉ် အင်္ဂါစုံမစုံ ရှိသေးဒယ်။ စိတ်ပိုင်းဂတော့ ပြောမနေနဲ့ဒေါ့ စိတ်အတို အရှည်၊ ရက်စက် သနား၊ ရမက်အကြီး အသေး ကွာဒယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် မပါဘဲနဲ့ကို မွေးဃထဲဂ ဖွားဖက်တော်နဲ့အတူ ပါလာဒါ။
ငါပေါဒဲ့အထဲမှာ ရဟန္တာတွေ ကံဖြစ်တယ်လို့ တလုံးမှ မပါဘူး။ မူးနေရင် စာမဖတ်နဲ့ကွာ။ နင်မေးဒဲ့ စရိုက်နဲ့အကျင့် ကွာပုံဂို ငါရည်ညွှန်းဂျင်ဒါ အပေါ့ အလေး ကွာပုံဂို ဆိုလိုဒယ်။ မြန်မာစဂါးမူယင်းမှာဒေါ့ ဘယ်လိုဆိုလည်း မသိဘူး။ သားသတ်မုဆိုးအထုံပါလာဒဲ့သူ ခလေးဘဝထဲဂ အကောင်ဂလေးတွေကို သတ်တမ်းဖြတ်တမ်း ဂဇားဒယ်။ သဘင်သည်အထုံပါလာသူဂ ကချင်ဆိုဂျင်ဒယ်။ နင်ဂ အားလုံးအတူတူပဲထင်နေရင် အိုင်းစတိုင်းထားဂဲ့ဒဲ့ ဖော်ဖြူလာတွေ သီအိုရီဒွေဂို ဂူဂဲလ်လုပ်ရှာလို့ရဒယ်၊ အနုမြူဘုန်း ထွင်ကြည့်ဘာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဂီတပညာရှင်မိုးဇက် (ကြောင်ကြီးရည်းစားမိုးစက်ဂလေးမဟုတ်ပါ) ထားဂဲ့ဒဲ့ ဂီတနုတ်စ်တွေနဲ့ နင်စန္ဒယားတီး သင်ကြည့်ဘာလား.. ဘာသံထွက်မလဲလို့…။
အထုံ စရိုက်ဆိုဒါ အတိတ်က ဖြည့်ဆည်းလာဒဲ့ အမူအကျင့်.. ဆက်လက်သယ်ဆောင်ဒဲ့အခါ အကျင့်ဖြစ်သွားဒယ်။ အဲဒါဂို ဓမ္မသဘောနဲ့ ကင်းရှင်းအောင် ဖြတ်နိုင်ဓဲ့အခါ နိဗ္ဗာန်ဆိုက်တယ်ခေါ်ဒယ်။ အရာမကျန်ဂဲ့အောင် ပယ်သတ်ဖို့ဂဒေါ့ ဘုရားရှင်တပါးပဲ တတ်နိုင်ဒယ်။ ရဟန္တာများ အရာထင် ကျန်ဂဲ့ပေမဲ့ ကိလေသာအစွဲ လုံးဝမကျန်ဒေါ့လို့ ကံမဖြစ်တော့ဘူး။ ပါရမီဆိုတာ အဲသလို ဖြတ်နိုင်ဖို့ စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်း တည်ကြည်ခိုင်ခံ့ဖို့ ဘဝပေါင်းများစွာဂ လေ့ကျက်သယ်ဆောင်လာဒဲ့ အားကြီးကောင်းမွန်ဒဲ့ ဘုန်းကံအထောက်အပံ့ ရှိနေဒါ၊ ရှိလာဒါဂို ခေါ်ဒါ။ အဂုဘဲကြည့် နင်ပါရမီအလွန်နည်းလို့ သာသနာနဲ့တွေ့ဘာလျက် ပါပလာရှာနေဒယ်…ပလာယာနဲ့ မတွေ့ဘာဈေနဲ့ ဆုတောင်းဘာဒယ်ကွယ်။ အတိတ်ကံဖယ်ထားရင်ဒေါ့ သနားယုံဂလွဲလို့ မတတ်နိုင်ဘူး…။ နင့်အကုသိုလ်ကံကိုဂ တယ်ကြီးသကိုး..။ သဂျီးဂို များများကပ်ထား.. ယမမင်းနဲ့တွေ့ရင် အပြစ်တွေအားလုံး သူ့ဂိုလွှဲချ.. ငရဲမီးလောင် သဂျီးချနင်းဆိုဒါ နင်ဓို့ မိုးပြားဓို့ ပစ်စုတ်ပံဝါဒီဓို့အတွက် သနားဂရုဏာသက်စွာနဲ့ တဘောင် ငါထွင်ပေးထားဒါ..။ :cool: